Valentine’s Day အမီ ချစ်သူအတွက် Handmade လက်ဆောင်လေးပြုလုပ်ရအောင်
9 Feb 2018 . 3:28 PM
Valentine Day နေ့လည်းရောက်တော့မှာဆိုတော့ ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူလေးကို ဘာလက်ဆောင်ပေးမယ်လို့ စဉ်းစားထားလဲ။ ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ရတဲ့ Hand Made လက်ဆောင်က ပိုပြီးအမှတ်တရဖြစ်စေမှာပါနော်။ ကိုယ်တိုင်လုပ်ပြီးပေးတာဆိုတော့ ကိုယ်ရဲ့အချစ်တွေကိုလည်း ဖော်ပြတာရောက်တာပေါ့။ ဒါ့ကြောင့်မို့ Handmade လက်ဆောင်ပစ္စည်းကို လွယ်လွယ်ကူကူပြုလုပ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီ Handmade လေးကတော့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါပဲ။ လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ အဖြူရောင်ဖန်ခွက်တစ်ခွက်၊ ဖောင်တိန်တစ်ချောင်းလေးရှိရင်ရပါပြီ။ ကိုယ်ထည့်ချင်တဲ့ပစ္စည်း ဒါမဟုတ် မုန့်၊ ချောကလက်တွေကို ဖန်ခွက်ထဲထည်ပြီး ဖန်ခွက်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ ကိုယ်ရေးချင်တဲ့စာကြောင်းနဲ့ ပုံလေးတွေဆွဲလိုက်ပါ။ ပြီးရင်တော့ မင်တွေပျက်မသွားအောင် Oven ထဲကို မိနစ်အနည်းငယ်လောက်ထည့်ထားပြီး သင်လိုချင်တဲ့ ဖန်ခွက်လှလှလေးကို ရရှိနိုင်ပါပြီ။
ဒါကတော့ ကိုယ့်ချစ်သူကို ဘယ်လောက်မြတ်နိုးကြောင်း ဘယ်လောက်ချစ်ကြောင်း စာသားတွေကို Valentine’s Card လေးဖန်တီးပြီး ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် ကဒ်တွေအများကြီးပေါ်မှာ စာလေးရေးလိုက်ပါ။ ကိုယ်ရေးထားတဲ့ကဒ်လေးတွေကို ကြိုးလေးတစ်ခုနဲ့ချိတ်ထားပြီး နေရာတစ်နေရာရာမှာ Surprise လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်နော်။
ကိုယ့်ချစ်သူကြိုက်တဲ့ သကြားလုံးလေးတွေကို အိတ်လှလှလေးနဲ့ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံး ပိတ်စနဲ့ချုပ်ထားတဲ့ အိတ်တစ်လုံးပေါ်မှာ ကိုယ့်အချစ်တွေကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ပုံပဲဖြစ်ဖြစ် စာသားလေးဖြစ်ဖြစ် ဆေးရိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးရိုက်ပြီးအခြောက်ခံပြီးရင်တော့ သကြားလုံး ဒါမှမဟုတ် ချောကလက်ထည့်လိုက်ရုံနဲ့ Handmade Candy Bags လေးကို ရရှိနိုင်ပါပြီ။
ကိုယ့်ရဲ့လက်တွဲဖော်ကို အချစ်စကားလုံးတွေပါတဲ့ ကွတ်ကီးမုန့်လေး မပေးချင်ဘူးလား။ မုန့်တွေမှာ စာရေးတဲ့ အနီရောင်ဆေးနဲ့ ကွတ်ကီးပေါ်မှာ ကိုယ်ရေးချင်တဲ့စာသားကို ရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကွတ်ကီးမုန့်ကြိုက်တတ်တဲ့ ချစ်သူအတွက်တော့ လုံးဝ Surprise ဖြစ်မယ့် Handmade လက်ဆောင်လေးဖြစ်သွားမှာ အသေအချာပါပဲ။
ခုတလော မွေးနေ့တွေမှာတောင် ကိတ်မုန့်ကြီးကြီးတွေကို မတွေ့ရတော့ဘဲ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ Cupcake လေးတွေနဲ့ ပြုလုပ်လာကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒီတော့.. Valentine’s Day မှာလည်း ချစ်သူအတွက် ကိုယ်တိုင်လုပ်ထားတဲ့ Cupcake လေးကို လက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါ။ ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း ကိတ်မုန့်ပေါ်မှာ တုတ်ချောင်းသေးသေးလေး စိုက်ထားလိုက်ပါ။ ပြီးရင်တော့ ကိုယ်ပြောချင်တဲ့ စကားလုံးတွေကို စာရွက်ပေါ်ရေးသားပြီး တုတ်ချောင်းလေးပေါ် ကပ်ထားလိုက်ပါ။ အရောင်ကိုတော့ အချစ်သင်္ကေတကိုဖော်ပြတဲ့ ပန်းရောင်ဆိုရင် ပိုပြီးရိုဆန်တာပေါ့။
ဆေးရောင်ခြယ်ထားတဲ့ပန်းအိုးလေးနဲ့ ကိုယ်အချစ်တွေကိုဖော်ပြလိုက်ပါ။ အရင်ဆုံးပန်းအိုးအသေးလေးတစ်လုံး အရင်ရှာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးရင် ပန်းအိုးအပြင်ဘက်ကနေ ပန်းရောင် ဒါမှမဟုတ် အရောင်နုလေးတွေနဲ့စပ်ပြီး အရောင်ခြယ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင်တော့ ချစ်သူကောင်မလေးကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ပန်းအမျိုးအစားလေးထည့်ပြီး ပေးလိုက်ပါ။ ချစ်သူကောင်းမလေးဆီက အချစ်တွေပိုရလာနိုင်မယ့် နည်းလမ်းလေးပါပဲ။
သူများစုံတွဲတွေ မစဉ်းစားမိကြတဲ့ လက်ဆောင်လေးပါ။ ခေါင်းအုံးလက်ဆောင်ပေးတယ်ဆိုတော့ ညဘက်အိပ်တဲ့အခါတိုင်း သင့်ကိုသတိရနေစေဖို့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ Love Pillow ကို ဖန်တီးလိုက်ပါ။ ခေါင်းအုံးအပေါ်မှာ အသဲပုံ ဒါမဟုတ် ကိုယ့်အချစ်တွေကိုဖော်ပြနေတဲ့ သင်္ကေတတစ်ခုခုကို ပုံဖော်လိုက်ရုံပါပဲ။
Valentine’s Day အမီ ခဈြသူအတှကျ Handmade လကျဆောငျလေးပွုလုပျရအောငျ
Valentine Day နလေ့ညျးရောကျတော့မှာဆိုတော့ ကိုယျ့ရဲ့ခဈြသူလေးကို ဘာလကျဆောငျပေးမယျလို့ စဉျးစားထားလဲ။ ကိုယျတိုငျပွုလုပျရတဲ့ Hand Made လကျဆောငျက ပိုပွီးအမှတျတရဖွဈစမှောပါနျော။ ကိုယျတိုငျလုပျပွီးပေးတာဆိုတော့ ကိုယျရဲ့အခဈြတှကေိုလညျး ဖျောပွတာရောကျတာပေါ့။ ဒါ့ကွောငျ့မို့ Handmade လကျဆောငျပစ်စညျးကို လှယျလှယျကူကူပွုလုပျနိုငျမယျ့ နညျးလမျးလေးတှကေို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
ဒီ Handmade လေးကတော့ ရိုးရိုးရှငျးရှငျးလေးပါပဲ။ လိုအပျတဲ့ပစ်စညျးတှကေတော့ အဖွူရောငျဖနျခှကျတဈခှကျ၊ ဖောငျတိနျတဈခြောငျးလေးရှိရငျရပါပွီ။ ကိုယျထညျ့ခငျြတဲ့ပစ်စညျး ဒါမဟုတျ မုနျ့၊ ခြောကလကျတှကေို ဖနျခှကျထဲထညျပွီး ဖနျခှကျမကျြနှာပွငျပျေါမှာ ကိုယျရေးခငျြတဲ့စာကွောငျးနဲ့ ပုံလေးတှဆှေဲလိုကျပါ။ ပွီးရငျတော့ မငျတှပေကျြမသှားအောငျ Oven ထဲကို မိနဈအနညျးငယျလောကျထညျ့ထားပွီး သငျလိုခငျြတဲ့ ဖနျခှကျလှလှလေးကို ရရှိနိုငျပါပွီ။
ဒါကတော့ ကိုယျ့ခဈြသူကို ဘယျလောကျမွတျနိုးကွောငျး ဘယျလောကျခဈြကွောငျး စာသားတှကေို Valentine’s Card လေးဖနျတီးပွီး ရေးရမှာဖွဈပါတယျ။ ဖွဈနိုငျရငျ ကဒျတှအေမြားကွီးပျေါမှာ စာလေးရေးလိုကျပါ။ ကိုယျရေးထားတဲ့ကဒျလေးတှကေို ကွိုးလေးတဈခုနဲ့ခြိတျထားပွီး နရောတဈနရောရာမှာ Surprise လုပျပေးလို့ရပါတယျနျော။
ကိုယျ့ခဈြသူကွိုကျတဲ့ သကွားလုံးလေးတှကေို အိတျလှလှလေးနဲ့ထညျ့ပေးရမှာဖွဈပါတယျ။ ပထမဦးဆုံး ပိတျစနဲ့ခြုပျထားတဲ့ အိတျတဈလုံးပျေါမှာ ကိုယျ့အခဈြတှကေို ကိုယျစားပွုတဲ့ပုံပဲဖွဈဖွဈ စာသားလေးဖွဈဖွဈ ဆေးရိုကျရမှာဖွဈပါတယျ။ ဆေးရိုကျပွီးအခွောကျခံပွီးရငျတော့ သကွားလုံး ဒါမှမဟုတျ ခြောကလကျထညျ့လိုကျရုံနဲ့ Handmade Candy Bags လေးကို ရရှိနိုငျပါပွီ။
ကိုယျ့ရဲ့လကျတှဲဖျောကို အခဈြစကားလုံးတှပေါတဲ့ ကှတျကီးမုနျ့လေး မပေးခငျြဘူးလား။ မုနျ့တှမှော စာရေးတဲ့ အနီရောငျဆေးနဲ့ ကှတျကီးပျေါမှာ ကိုယျရေးခငျြတဲ့စာသားကို ရေးပေးရမှာဖွဈပါတယျ။ ကှတျကီးမုနျ့ကွိုကျတတျတဲ့ ခဈြသူအတှကျတော့ လုံးဝ Surprise ဖွဈမယျ့ Handmade လကျဆောငျလေးဖွဈသှားမှာ အသအေခြာပါပဲ။
ခုတလော မှေးနတှေ့မှောတောငျ ကိတျမုနျ့ကွီးကွီးတှကေို မတှရေ့တော့ဘဲ ခဈြစရာကောငျးတဲ့ Cupcake လေးတှနေဲ့ ပွုလုပျလာကွတာကို တှရေ့ပါတယျ။ ဒီတော့.. Valentine’s Day မှာလညျး ခဈြသူအတှကျ ကိုယျတိုငျလုပျထားတဲ့ Cupcake လေးကို လကျဆောငျပေးလိုကျပါ။ ပုံမှာပွထားတဲ့အတိုငျး ကိတျမုနျ့ပျေါမှာ တုတျခြောငျးသေးသေးလေး စိုကျထားလိုကျပါ။ ပွီးရငျတော့ ကိုယျပွောခငျြတဲ့ စကားလုံးတှကေို စာရှကျပျေါရေးသားပွီး တုတျခြောငျးလေးပျေါ ကပျထားလိုကျပါ။ အရောငျကိုတော့ အခဈြသင်ျကတေကိုဖျောပွတဲ့ ပနျးရောငျဆိုရငျ ပိုပွီးရိုဆနျတာပေါ့။
ဆေးရောငျခွယျထားတဲ့ပနျးအိုးလေးနဲ့ ကိုယျအခဈြတှကေိုဖျောပွလိုကျပါ။ အရငျဆုံးပနျးအိုးအသေးလေးတဈလုံး အရငျရှာရမှာဖွဈပါတယျ။ ပွီးရငျ ပနျးအိုးအပွငျဘကျကနေ ပနျးရောငျ ဒါမှမဟုတျ အရောငျနုလေးတှနေဲ့စပျပွီး အရောငျခွယျလိုကျပါ။ ပွီးရငျတော့ ခဈြသူကောငျမလေးကွိုကျနှဈသကျတဲ့ ပနျးအမြိုးအစားလေးထညျ့ပွီး ပေးလိုကျပါ။ ခဈြသူကောငျးမလေးဆီက အခဈြတှပေိုရလာနိုငျမယျ့ နညျးလမျးလေးပါပဲ။
သူမြားစုံတှဲတှေ မစဉျးစားမိကွတဲ့ လကျဆောငျလေးပါ။ ခေါငျးအုံးလကျဆောငျပေးတယျဆိုတော့ ညဘကျအိပျတဲ့အခါတိုငျး သငျ့ကိုသတိရနစေဖေို့ ရညျရှယျခကျြနဲ့ Love Pillow ကို ဖနျတီးလိုကျပါ။ ခေါငျးအုံးအပျေါမှာ အသဲပုံ ဒါမဟုတျ ကိုယျ့အခဈြတှကေိုဖျောပွနတေဲ့ သင်ျကတေတဈခုခုကို ပုံဖျောလိုကျရုံပါပဲ။
စစ်မှန်တဲ့ Couple Goal ဆိုတာ
“ရန်ဖြစ်လိုက် ပြန်ချစ်လိုက်” ဖြစ်အောင် ဘယ်လို ရန်ဖြစ်ကြမလဲ
ချစ်လက်တွေခိုင်မြဲချင်တယ်ဆိုရင် ရှောင်ကြဉ်သင့်တဲ့ အမူအကျင့် (၅) မျိုး
လုပ်ငန်းခွင်က လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နဲ့ တွဲမယ်ဆို ဘယ်အချက်တွေကို ထည့်သွင်း စဉ်းစားရမလဲ
by Editor .3months ago
by Moethae Say .3months ago